Casharka 42aad ee Kitaabka Siirada Nebiga Muhammed SCW
Ninkaas oo ahaa nin aad u shar badan markii uu maqlay guushii muslimiinta ee Badar iyo dilitaankii odeyaashii qureysheed ayuu wuxuu yiri, "taasi ma xaq baa?", kuwaasi waxa ay ahaayeen carab kuwii ugu shaaraf badnaa iyo dadka boqorradoodii, Ilaah baan ku dhaartaye haddii uu Maxammed kuwaas laayey dhulka gudihiisa (Dhimasho) ayaa ka kheyr badan, wuxuuna ammaanay cadowgoodii. Rakuubkiisii (awkiisii) ayuu markaas fuulay ilaa uu ka tegay Makka iyo qureysh. Wuxuu ku degay Mudhalib binu abii Waddaac Al-sahami. Ka dib wuxuu guda galay isaga oo ooyaya in uu gabay ku ammaano raggii mushrikiinta looga laayey Badar, wuxuuna ku booriyey dadka in Nabiga SCW lala dagaallamo oo lala colleytamo.
Abuu Sufyaan iyo raggii mushrikiinta ahaa waxa ay ku yiraahdeen "ma diintayada ayaa Alle xagiisa loogu jacayl badan yahay mise diinta Maxammed?, labadayada qolose yaa hanuunsan oo Alle u dhaw?", wuxuu yiri "idinka ayaa ka hanuunsan", Allaah SW isagoo arrintaa ka hadlaya wuxuu yiri:
((MA ARAGTAY KUWA KITAABKA QAYBTA LAGA SIYEY OO RUMAYNAYA SIXIR IYO SHAYDAAN, KUNA DHAHAYA KUWA GAALOOBAY "KUWAAN (GAALADA AH) AYAA WADDO UGA HANUUN BADAN KUWA MU'MINIINTA AH, KUWAASI (YAHUUDDA) WAA KUWUU ALLE NACLADAY, CIDDII ALLE NACLADANA U HELI MAYSID GAR GAARE)). (Suuratu-Nisaa' 51-52).
Kacab intaas ka dib Madiina ayuu ku soo laabtay, wuxuuna tiriyey gabayo uu ku af-lagaadaynayo gabdhihii muslimaatka ahaa isla markaasna uu islaamaka ku dhibayo. Rasuulku SCW, markuu arkay ninkaas iyo sharta uu wada iyo heerka uu gaaray oo ah inuu gabdhihii muslimaatka ahaa af-lagaadeynayo, islaamkana caayayo, ayuu wuxuu asxaabtiisa ku yiri "yaan Kacab binu Ashraf u diraa, Ilaah iyo Rasuulkiisa ayuu dhibaye?". Waxaa markaas istaagay Maxammed binu Maslama oo yiri "aniga, Rasuulkii Ilaahayow ma jeceshahay in aan dilo?", Rasuulku SCW wuxuu yiri "haa". Maxammed binu Maslama ayaa Nabiga SCW ku yiri ii idan haddaba in aan waxaan rabo kaa sheego", Rasuulkuna SCW wuxuu yiri "dheh wixii aad doontid".
Maxammed binu Maslama waxaa markaa raacay dhowr nin oo kala ahaa: Cubaada binu bishir, Xaarith binu Aws, Abuu Cabsa binu Xabir iyo Abuu Naa'ila (sulkaan binu salaam) oo ay Kacab binu Ashraf naas wada nuugeen. Maxammed binu Maslama ayaa markaa Kacab u tegey oo ku yiri "ninkani (Nabi SCW) wuxuu na weydiiyey sadaqo", Kacab ayaa yiri "Ilaah baan ku dhaartaye waan filayey". Maxammed binu Maslama wuxuu yiri "hadda waan raacnay, mana ka harayno ilaa aan aragno meesha ay arrintiisu ku dambayso, waxaan marka kaa dooneynaa in aad na amaahisid jawaan ama labo jawaan (oo raashin ah)", Kacab baa yiri "rahan (carbuun) ayaan idinka rabaa", Maxammed ayaa yiri "maxaad doonaysaa?", Kacab ayaa ku warceliyey "dumarkiina rahan iiga dhiga". Maxammed ayaa markaa Kacab su'aaley "sidee baan dumarkayaga kuugu rahannaa adigoo carab ugu qurux badan?", wuxuu Kacab yiri "haddaba wiilashiina ii rahma", Maxammed ayaa yiri "ma wiilashayada ayaannu kuu rahannaa si hadhow loo caayo oo loo yiraahdo "waa kii jawaanka ama labada jawaan loo rahnay" taasi ceeb bay nagu tahay, laalkiin waxaan kuu rahmaynaa oo kuu dhiibeynaa hubkayaga". Abuu Naa'ilna sidoo kale ayuu sameeyey.
Kacab ayaa markaa kor u hadlay isagoo raba in arrinkaa la maqlo, waxaa markaa lagu yiri "war hooggaagee ina Ashrafow dan baan kuu sheeganay ee noo qari", Kacabna, arrinkaa waa aqbalay, Abuu Naa'ila ayaa markaa hadlay oo yiri "ninkaani (Rasuulka SCW ) dhib buu noogu yimid oo carab haddaanu nahay caado ayaannu lahayn, hal dhufeys baannu ku wada jirney. Waddooyinkii buu naga gooyey ilaa ay ciyaalkayagii ka caqdaan oo naftayadii ka dhibaatooto oo annaga iyo ciyaalkayagii dhibaato aan ku sugnaano". Ka dib wuxuu yiri abuu Naa'il "asxaab aan isku fikrad nahay ayaa ila socotay, waxaan doonayaa in aan kuu keeno oo aad wax ka iibisid, wanaajisana".
Ninkii la oran jirey Kacab binu Ashraf wuu yeelay arrimahaas oo dhan. Waxaa la ballamay habeeennimadii bisha Rabbiicul Awal ahayd 14, sanadkii 3aad ee hijriga. Kooxdii hawshan fulineysey waxa ay isla habeenkiiba u tageen Rasuulku SCW wuuna la soo dardaarmay, wuxuuna ku yiri "ku socda magaca Allaah, Allahayow u kaalmee". Ka dib Rasuulku SCW wuxuu ku laabtay gurigiisii oo salaad ayuu galay. Kooxdii waxay tageen aaggii uu degganaa Kacab waxaana u dhawaqay Abaa Naa'ila. Kacab wuu istaagay si uu u baxo, haweentiisii oo uu mar dhow soo guursaday, ayaa ku tiri "xaggee saacaddan u baxaysaa? dhawaaqa aan maqlay waa mid dhiig ka da'ayee". Wuxuu yiri Kacab "waa walaalkay Maxammed binu Maslama iyo midkaan naska wada nuugnay, Abuu Naa'ila, ninka ragga ahna haddii loogu yeero arrin waa yeelaa". Markaa ayuu soo baxay isagoo barafuun isku soo shubay oo madaxiisu soo carfayo. Abuu Naa'ila wuxuu saaxiibbadiis ku yiri "markuu yimaado madaxa ayaan qabanayaaye, markii aad aragtaan in aan si fiican u qabtay sefaha ku booba". Kacab markuu yimid oo mudoo lala sheekeysanayey, ayuu Abuu Naa'ila ku yiri "ka warran ina Ashrafow haddii aannu aadno derbiga duqdii hebla ahayd si aan isaga sheekaysanno habeenka inta nooga hartay", isna wuxuu yiri "haddii aad doontaan waxba kama qabo".
Markii la baxay oo dhex la sii marayo ayuu Abuu Naa'ila yiri "caawa oo kale ma arag cid ka catar udgoon Kacab", markuu hadalkaa maqlay ayuu faan galay oo yiri "dumarka carbeed catarkoodii baa agtayda ah", Abuu Naa'ila wuxuu yiri "ma ii oggolanaysaa in aan ursado madaxaaga?" Kacab wuxuu yiri "haa", markaas ayuu Abuu Naa'ila gacanta madaxa ka geliyey oo ursaday, saaxiibbadiisna ursiiyey. Xoogaa ayaa la socday. Abuu Naa'ila ayaa markaa yiri "ma ku celiyaa?", "haa" ayuu Kacab yiri, sidii oo kale ayuu yeelay. Ka dib markii xoogaa la sii socday oo Kacab is kala dhigtay ayuu Abuu Naa'ila yiri sidii oo kale, markuu Kacab u oggolaadayna, madaxa intuu gacanta ka geliyey ayuu si fiican uga faro buuxsaday, oo yiri "waan hayaa cadowgii Ilaahay", markaas ayey seefaha ku boobeen hase yeeshee seefihiii waxba waa ka tari waayeen (wey dili waayeen), markaas ayaa Maxammed binu Maslama mindi ka geliyey caloosha ilaa uu ka diley.
Markii ay Rasuulka SCW u soo dhow yihiin ayey takbiirsadeen, Rasuulkuna SCW markii uu maqlay takbiirtooda ayuu fahmay in ay soo dileen cadowgii Ilaahay, markaas ayuu isna takbiirsaday. Markii ay u yimaaddeenna wuxuu yiri "wejiyaal baa liibaanay", markaa ayey dheheen "wejigaaguna wuu liibaanay Rasuulkii Allow", ka dibna madaxii Kacab oo ay soo gooyeen ayey Rasuulka SCW hortiisa ku soo tuureen, Rasuulku SCW Allaah ayuu mahadiyey dilitaanka ninkaas la dilay, Xaarithna meeshii nabarka ayuu uga tufay, waan u buskootay.